तत्काल बर्खास्त | Law & More B.V.
ब्लग » तत्काल खारेज
अगस्ट 24, 2020
दुबै कर्मचारी र रोजगारदाता विभिन्न तरीकाले बर्खास्तको साथ सम्पर्कमा आउन सक्छन्। तपाईं आफैले यो छनौट गर्नुभयो वा छैन? र कुन परिस्थितिमा? सब भन्दा कठोर तरिकाहरू मध्ये एक तत्काल खारेज हो। त्यो के हो? त्यसो भए कर्मचारी र रोजगारदाता बीच रोजगार सम्झौता तुरुन्तै समाप्त हुन्छ। रोजगार सम्बन्ध भित्र, यो विकल्पले दुबै रोजगारदाता र कर्मचारीलाई अर्जित गर्दछ। यद्यपि यस प्रकारको खारेज सम्बन्धी निर्णय कुनै पनि पार्टीले रातोरात लिन सक्दैन। दुबै केसहरूमा, केहि शर्तहरू मान्य खारेजको लागि लागू हुन्छन् र पार्टीहरूसँग केहि अधिकार र दायित्व हुन्छन्।
वैध तत्काल खारेजको लागि, दुबै रोजगारदाता र कर्मचारीले निम्न कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्दछ।
तत्काल कारण। परिस्थिति यस्तो हुनुपर्दछ कि कुनै एक पार्टी यसलाई खारेज गर्न बाध्य छ। यसले कार्यहरू, विशेषताहरू वा एक पक्षको आचरणसँग सम्बन्धित छ, जसको नतीजाको रूपमा अर्को पक्षले रोजगार सम्झौता जारी राख्न अपेक्षा गर्न सक्दैन। अधिक विशेष रूपमा, यो कार्यस्थलमा जीवन वा स्वास्थ्यलाई जोखिम, धोका वा गम्भीर खतरा हुन सक्छ। अर्को कारण रोजगारदाताद्वारा कोठा र बोर्डको पर्याप्त प्रावधानको अभाव हुन सक्छ, यद्यपि यो सहमत भइसकेको छ।
तत्काल खारेज। यदि नियोक्ता वा कर्मचारीले तत्काल प्रभावको साथ बर्खास्त गर्न अगाडि बढ्छ भने, त्यस्तै खण्डन तुरुन्तै दिइनु पर्दछ वा तुरुन्तै लिनुपर्दछ, अर्थात घटना वा तुरुन्तै अपराधीको कार्य पछि। थप रूपमा, पार्टीहरूलाई त्यस्तो खारेजमा जानु अघि छोटो समय लिनको लागि अनुमति छ, उदाहरणका लागि कानुनी सल्लाह लिन वा छानबिन शुरू गर्न। यदि कुनै एक पार्टी ज्यादै लामो प्रतीक्षा गर्छ भने, यो आवश्यकता अब पूर्ण हुन सक्दैन।
तत्काल सूचना। थप रूपमा, तत्काल कारण विवादमा अर्को पक्षलाई सूचित गर्नुपर्दछ, ढिलाइ नगरी नै, यत्तिकै तुरुन्त खारेज भएपछि।
यदि यी आवश्यकताहरू पूरा भएन भने, खारेज रद्द हुन्छ। के माथिका सबै तीन शर्तहरू भेटिएका छन्? तब पार्टीहरू बीच रोजगार सम्झौता तत्काल प्रभावको साथ समाप्त हुन्छ। यस्तो खारेजको लागि, UWV वा उपविभाग अदालतबाट अनुमति अनुरोध गर्नुपर्दैन र कुनै सूचना अवधिको अवलोकन गर्नुपर्दैन। नतिजा स्वरूप, पार्टीहरूसँग केहि अधिकार र दायित्व हुन्छन्। यी कुन अधिकार वा दायित्व हो, तल छलफल गरिएको छ।
यदि कर्मचारी एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले तत्काल प्रभावको साथ खारेज गर्ने निर्णय गर्दछ, उदाहरणको लागि नियोक्ताको तर्फबाट गम्भीर अपराधी कार्य वा चुकौतीको कारण, कम्तिमा २ वर्षको लागि कार्यरत रोजगारदातालाई संक्रमण भुक्तानीको हकदार हुन्छ। के रोजगारदाता तत्काल प्रभावको साथ बर्खास्त हुनेछ? त्यो अवस्थामा, कर्मचारी सैद्धान्तिक रूपले संक्रमणको भुक्तानीको हकदार हुँदैन यदि बर्खास्ती गम्भीर अपराधी कार्य वा कर्मचारीको पक्षबाट चुकिएको परिणाम हो। उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतले अन्यथा निर्धारण गर्दछ। त्यो अवस्थामा, रोजगारदाताले अझै पनि आंशिक रूपमा स to्क्रमण शुल्कलाई भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। के तपाई शर्तहरु बारे मा जान्न चाहानुहुन्छ को लागी वा एक संक्रमण शुल्क को गणना को बारे मा? त्यसपछि वकिलहरु लाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.
आशय वा गल्तीको कारण तत्काल कारणको लागि क्षतिपूर्ति
यदि कर्मचारीले तत्काल कुनै जरुरी कारणको लागि राजीनामा गरेमा नियोजकले कुनै नराम्रो नियत वा गल्ती गरेको खण्डमा रोजगारदाताले सम्बन्धित कर्मचारीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ। यो क्षतिपूर्ति कर्मचारीको ज्यालामा निर्भर गर्दछ र कम्तिमा पनि कर्मचारीले ज्यालामा प्राप्त गरेको रकमको वैधानिक सूचना अवधिको अवधिमा बराबर हुनै पर्छ। उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतले पनि यस क्षतिपूर्तिलाई निष्पक्षतामा कम गर्न वा बढाउन सक्छ। यसको विपरित, कर्मचारीले आफ्नो उद्देश्य वा गल्तिको परिणामस्वरूप आफ्नो रोजगारदातालाई एक तुलनात्मक क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्नेछ र उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतले पनि यस क्षतिपूर्तिको रकम समायोजित गर्न सक्दछ।
तपाईं खारेजको साथ असहमत हुनुहुन्छ
एक रोजगारदाताका रूपमा, के तपाइँ तपाइँको कर्मचारी द्वारा लिइएको तुरुन्त बर्खास्त गर्न असहमत हुनुहुन्छ? त्यो अवस्थामा, दिनको २ महिना भित्र जुन तपाईको कर्मचारीसँगको रोजगार सम्झौता तत्काल खारेजको कारण समाप्त भयो, तपाईले उप-जिल्ला अदालतलाई तपाईलाई क्षतिपूर्ति दिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको कर्मचारीले तिर्नु पर्छ। एक रद्द विकल्प संग सम्झौता भएको खण्डमा, उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतले सूचना अवधिलाई बेवास्ता गरेकोले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ। यो क्षतिपूर्ति त्यसपछि तपाईंको कर्मचारीले लागू सूचना अवधिको लागि प्राप्त गरेको ज्यालाको बराबर हुन्छ।
के तपाइँ एक कर्मचारी हुनुहुन्छ र के तपाइँ तत्काल प्रभावको साथ तपाइँलाई बर्खास्त गर्ने तपाइँको रोजगारदाताको निर्णयसँग असहमत हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईं यस खारेजलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्छ र बर्खास्त रद्द गर्न उपविभाग अदालतलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको सट्टा सबडिस्ट्रिष्ट अदालतबाट क्षतिपूर्ति अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। दुबै अनुरोधहरू पनि उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतमा पेश गर्नुपर्दछ २ दिन पछि जब अनुबन्ध सारांश खारेज द्वारा समाप्त भयो। यी कानूनी कार्यवाहीमा, रोजगारदाताले तत्काल बर्खास्त आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अभ्यासले देखाउँदछ कि रोजगारका लागि बर्खास्तको लागि तत्काल कारण पहिचान गर्न प्रायः गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण नियोक्ताले ख्याल राख्नु पर्छ कि यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कर्मचारीको पक्षमा फैसला सुनाउनेछ। यदि एक कर्मचारीको रूपमा, तपाईं उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतको निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्न, तपाईं यसको बिरूद्ध अपील गर्न सक्नुहुन्छ।
कानुनी कार्यवाही रोक्नको लागि, सम्झौता सम्झौता गर्नका लागि दलहरूबीच परामर्श गरेर निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ र यसैले खारेजलाई तुरुन्त प्रभावको साथ आपसी सहमतिबाट बर्खास्तमा रूपान्तरण गर्दछ। यस्तो सम्झौता सम्झौता दुबै पक्षका लागि फाइदा ल्याउन सक्छ, जस्तै छोटो अवधिको सुरक्षा र सम्भवतः कर्मचारीको लागि बेरोजगारी सुविधाहरूको अधिकार। तत्काल बर्खास्तको स्थितिमा कर्मचारीसँग यो अधिकार हुँदैन।
के तपाइँ तत्काल बर्खास्तको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईको कानूनी स्थिति र यसको नतीजाको बारेमा जानकारी गराउन महत्त्वपूर्ण छ। मा Law & More हामी बुझ्छौं कि बर्खास्त रोजगार रोजगार कानूनको एक सब भन्दा टाढाको उपाय हो जसको दुबै रोजगारदाता र कर्मचारीका लागि दूरगामी परिणामहरू छन्। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाउँछौं र हामी तपाईंको अवस्था र सम्भावनाहरू तपाईंसँगै जाँच्न सक्छौं। Law & Moreवकिलहरु खारेज कानून को क्षेत्र मा विशेषज्ञ छन् र एक बर्खास्त प्रक्रिया को दौरान तपाईंलाई कानूनी सल्लाह वा सहायता प्रदान गर्न खुसी छन्। के तपाईंसँग बर्खास्तिको बारेमा अरू प्रश्नहरू छन्? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More वा हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् Dismissal.site.
अघिल्लो पोस्ट गुनासो र पुन: गणना
अर्को पोस्ट टकीला संघर्ष